आम हड्ताल प्रभाव : आज देशभरी के के भयो ? – Janacharcha.com
» ब्यानर » राजनीति अंक: 3413
आम हड्ताल प्रभाव : आज देशभरी के के भयो ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल समूहले आह्वान गरेको आमहड्तालको कारण आज मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बन्दका कारण देशभर लामो दुरिका सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
बन्दलाई सफल पार्न प्रचण्ड–नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरु बिहानै देखि बिभिन्न सहरहरुको मुख्य स्थानहरुमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । बन्दको कारण मुलुकभरका व्धियालयहरु आज संचालन हुन सकेन । मुलुकको बिभिन्न स्थानमा बन्दकर्ता र प्रहरी बिच घम्साघम्सी समेत भएको छ ।
प्रदेशको राजधानी बिराटनगरमा बन्दकर्ताहरुले विहानदेखिनै चार चक्के सवारीहरु चल्न दिएका छैनन् । उनीहरुले ठाँउ–ठाँउमा टायर बालेर सवारी आवत जावतमा अवरोध पुर्याई रहेका छन् । दुइ चक्के सवारी तथा सिटिसफारीहरु फाटफुट रुपमा गुडिरहेका छन् ।
विराटनगरका प्राय चोकहरुमा हड्ताल सफल बनाउन बन्दकर्ताहरु समुह बनाएर बसेका छन् । उनीहरुले बिहानदेखि नै बजारक्षेत्रमा पसलहरु खोल्न दिएका छैनन् । विराटनगरको विद्यालयहरुपनि संचालनमा आएको छैन् । बैंक तथा वित्तयसंस्थाहरु भने सुरक्षा निकायको कडा निगरानीमा खुलिरहेको छ ।
त्यस्तै धरानमा छोटो दूरीमा यातायात आवगमनमा बाधा पु¥याईएको छैन । धरानको भानुचोकमा बिहान प्रदर्शनकारी र मजदुरबीच घम्साघम्सी भएको छ ।
प्रदेश नं. २ मा पनि बन्दकर्ताहरुले विहानदेखिनै चार चक्के सवारीहरु चल्न दिएका छैनन् । उनीहरुले मुख्य राजमार्गमा बसेर सवारी सञ्चालनमा अवरोध गरिरहेका छन् । बन्दकर्ताले लहानमा बिहीबार बिहानै ट्रकमा ढुंगा हानेका छन् । उक्त कार्यमा संलग्न दुई जनालाई तत्काल पक्राउ गरिएकोे छ ।
बागमती प्रदेशमा प्रहरीले लामो दूरीका सवारीसाधनलाई स्कर्टिङ गरेर गन्तव्यततर्m पठाइरहेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा भने बन्दको खासै प्रभाव देखिएको छैन । अन्य जिल्लामा आंशिक प्रभाव छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा आमहड्ताल सफल पार्न भन्दै प्रचण्ड आफैं सडकमा निस्किएका छन् । प्रचण्डले सरकारले बलमिच्याइँ गरेर संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गरेकाले त्यसबारे जनतालाई जानकारी दिन सडकमा आउनु परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा भने बन्दको प्रभाव आंशिक रुममा देखिएकोे छ ।
महेन्द्रपुलमा प्रचण्ड–माधव समूहले विहानदेखिनै प्रदर्शन गरिरहेको छन् । प्रदर्शनमा रामकाजी गुरुङ, दीपक कोइराला लगायतका नेताहरु देखिएका छन् ।
ओली समूहका नेता–कार्यकर्ताले भने बन्दको विरोधमा मोटरसाइकल ¥याली निकालेका छन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बन्दको प्रभाव आंशिक रहेको छ । ठाउँठाउँमा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता, कार्यकर्ता प्रदर्शन गरिरहेको छन । यात्रा गर्न चाहनेका लागी मागअनुसार स्कर्टिङको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
बुटवलमा बिहानैदेखि सार्वजनिक यातायात र मालवाहक सवारीसाधनहरु चलेका छैनन् । रुपन्देहीमा पनि आम हड्तालको प्रभाव परेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजमार्गहरुमा सवारीसाधन चलेका छैनन् । प्रचण्ड–माधव समूहका नेता कार्यकर्ताले राजमार्गहरुमा सवारीसाधन चल्न दिएका छैनन् भने ओली समूहका नेता–कार्यकर्ताहरु खुला गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
प्रदेश अन्र्तगतका राजमार्ग र विभिन्न सहरीक्षेत्रीमा आम–हडतालको प्रभाव देखिएको छ । सहरका मुख्यक्षेत्रहरुमा बन्दतकर्ताहरुले टायर बालेका छन् । काठमाडौंबाट सु्दूर पश्चिमका लागी छुटका लामो दुरीका सवारी साधनलाई प्रहरीले स्कर्टिङ गरेर गन्तव्यसम्म पु¥याईरहेको छ ।